दोषी महसुस गर्नुहोस्, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
के तपाईं दोषी महसुस गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ इसाई नेताहरू छन् जसले नियमित रूपमा मानिसहरूलाई दोषी महसुस गराउने कोसिस गर्दछन् ताकि तिनीहरूले अरूलाई परिवर्तन गर्न अझ बढी गर्न सक्दछन्। पास्टरहरू तिनीहरूको चर्चहरूलाई असल कामहरू गर्न लगाउन व्यस्त छन्। यो गाह्रो काम हो र तपाईं कहिलेकाँही पास्टरहरूलाई दोष दिन सक्नुहुन्न जब तिनीहरू कहिलेकाँही तर्कहरू प्रयोग गर्न लोभ्याउँदछन् जसले मानिसहरूलाई केहि गर्न लगाएकोमा दोषी महसुस गराउँछ। तर त्यहाँ अरू विधिहरू छन् जुन अरूहरू भन्दा खराब छन्, र सबैभन्दा खराबमध्ये एउटा यो हो कि बाइबलीय दृष्टिकोण हो कि मानिसहरू नरकमा छन् किनकि तपाईंले उनीहरूको मृत्यु हुनुभन्दा अघि उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुभएन। तपाईंले कसैलाई चिन्नुहुन्छ जो खराब र अपराधी महसुस गर्दछन् जसले सुसमाचारको साझेदारीमा विफलताको लागि गरेको छ जसको पछि बितिसकेको छ। हुनसक्छ तपाईलाई त्यस्तै लाग्छ।
मलाई स्कूलको साथीको एक ईसाई मित्र याद छ जसले एक किशोर समूहलाई एक मानिससँगको भेटको अन्धकारको कथा सुनाए, जहाँ उनले उसलाई सुसमाचारको बखान गर्ने दृढ आवेग महसुस गरे तर त्यसो गर्नबाट रोके। पछि उसलाई थाहा भयो कि त्यस व्यक्तिलाई त्यही दिन कारले टक्कर दियो र उसको मृत्यु भयो। "यो मानिस अहिले नरकमा छ र अवर्णनीय पीडाले ग्रसित छ," उनले समूहलाई भने। त्यसपछि नाटकीय विराम पछि, उनले थपे, "र मैले ती सबैका लागि जवाफ दिनुपर्दछ!" उनले तिनीहरूलाई भने कि यसको कारण उहाँ दुःस्वप्नहरुबाट पीडित हुनुभयो र ओछ्यानमा सुस्नुभयो किनभने उनको असफलताको डरलाग्दो तथ्यले, जुन त्यस गरिबलाई सदाको लागि अग्निमय नरकको कष्ट झेलिनेछ।
एकातिर, तिनीहरू जान्दछन् र सिकाउँछन् कि 'परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले येशूलाई मुक्ति दिन पठाउनुभयो, तर अर्कोतर्फ उनीहरू विश्वास गर्दछन् कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई नरकमा पठाउनुहुन्छ किनकि हामी उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न असफल गर्दछौं। , यसलाई "संज्ञानात्मक असन्तुष्टि" भनिन्छ - जब दुई विपरित शिक्षा एकै समयमा विश्वास गरिन्छ। तिनीहरूमध्ये कतिपयले खुसीसाथ परमेश्वरको शक्ति र प्रेममा विश्वास गर्दछन्, तर तिनीहरू एकै समयमा यस्तो व्यवहार गर्दछन् कि यदि परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउन बाध्य पार्नुभयो भने यदि हामी उनीहरूसँग समयमै पुग्न सकेनौं भने। यूहन्ना :6,40:० मा, येशूले यसो भन्नुभयो: “मेरो बुबाको इच्छा यही हो कि जसले छोरालाई देख्छ र उसमा विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाउँदछ; म उसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्छु।
यो बचत गर्नको लागि परमेश्वरको काम हो, र पिता, पुत्र र पवित्र आत्माले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो राम्रो कामको हिस्सा हुन पाउनु आशिष हो। यद्यपि हामी यो पनि सचेत हुनुपर्दछ कि परमेश्वर हाम्रो असक्षमताको बाबजूद प्राय: कार्य गर्नुहुन्छ। यदि कसैको मृत्यु हुनुभन्दा अघि कसैलाई सुसमाचार प्रचार गर्न असफल भएकोमा यदि तपाईं दोषी अन्तस्करणले बोझ पाउनु भएको छ भने, त्यो बोझ येशूलाई किन नदिने? भगवान धेरै बेइमान छैनन्। कोही पनि आफ्नो औंलाहरुबाट चिप्लन्छ र कोही पनि तपाईको कारणले नर्कमा जानु हुँदैन। हाम्रो परमेश्वर राम्रो, दयालु र शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईं उसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ सबैको लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ, केवल तपाईं मात्र होइन।